Banyere Anyị - Shijiazhuang Lousun Textile & Garment Co., Ltd.
Shijiazhuang Lousun Textile & Garment Co., Ltd. e hiwere na 2006, emi odude ke Shijiazhuang City, Hebei Province nke China (nke dị nso Beijing Capital), ọ bụ ọkachamara Chinese OEM & ODM emeputa nke ọtụtụ iche iche nke akpa na e zigara EU, America na Australia wdg mba.Anyị jere ozi maka ọtụtụ ụdị kachasị elu n'ụwa nwere ezigbo mma yana ọnụ ahịa dị mma.
Na ihe karịrị 10 afọ nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ, anyị nwetara n'ụwa nile ahịa' aha na recogunition na akpa ubi na-enyere ndị ahịa ike siri ike na gbasaa ahịa site anyị specation na-echebara ọrụ.
N'okpuru ebe a bụ otu n'ime ndị ahịa France ochie - aha ya bụ Nicolas Duval, onye dere ekele dị mma na m linkedin, o kwuru, sị: "M na Maria na-arụ ọrụ kemgbe afọ 5, ọ bụ ọkachamara nke ukwuu, na-aza ozi ịntanetị m mgbe niile na nkeji, ọ na-atọ m ụtọ ịrụ ọrụ. ya na onye nwere ezi uche."
Akpa ákwà anyị ji dị ka EU ọhụrụ ụkpụrụ Environment Arịrịọ, ákwà shrinage, agba fastness, anụ ahụ, na-emerụ chemical etc.datas anyị nditịm na-eso na anyị ọ bụla nnukwu mmepụta, na maka QC ịlele, anyị mgbe niile dabeere AQL 2.5-4.0 ọkọlọtọ.
Ihe Anyị Na-eme?
Ọnụ ahịa ngwaahịa
Akpa egbe/Mkpa & Akpa & Akpa & Ụta & Oche & Messenger & Sling & Duffle & Tote Cases wdg.
Ọnụọgụ na-agbanwe agbanwe
Atụmatụ ndị ọzọ, Ogo kwụsiri ike na ọnụ ahịa asọmpi
Embroidery & Logos Ebipụtara Dị
10 * 40HQ containers kwa ọnwa, gburugburu 80,000pcs kwa ọnwa.
Ndị ọrụ 400 na-akwa ákwà.
Na-emekarị gburugburu 60-75 ụbọchị mgbe natara nkwụnye ego.
Nnọọ kọntaktị ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị, anyị ga-enye nzaghachi ọrụ email ngwa ngwa ma ọ bụ nkwurịta okwu ekwentị ma ọ bụ whatsapp ma ọ bụ anyị-chat dabere na ihe ị chọrọ ka ọ dị irè karị, daalụ maka ntụkwasị obi gị.
- Shijiazhuang Lousun Textile & Garment Co., Ltd.